Tuesday December 01, 2020 - 06:50:40 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay soo gaba gabayn doonto khilaafka udhaxeeya dowladaha dawaaqiidda mandiqadda khaliijka carabta kuwaas oo dhabarka isku jeediyay sanaddii 2017.
Afhayeen uhadlay aqalka cad ayaa sheegay in maamulka Trump ee waqtigiisu sii idlaanayo uu dadaallo ugu jiro sidii heshiis buuxa lookala dhax dhigi lahaa dowladaha dhaca mandiqadda.
Taliyaha madaxweynaha Mareykanka ee arrimaha bariga dhexe ninka lagu magacaabo Jared Kushner ayaa maalmaha soo socda ubaqooli doono wadamada Qadar,Sacuudiga iyo imaaraatka carabta halkaas oo uu kulamo kula qaadan doono boqorrada qowsaarada u ah saliibiyiinta ee is khilaafsan.
ilo wareedyo diblumaasiyadeed ayaa warbaahinta Mareykanka u sheegay in lataliyaha Trump uu kulamo lasoo qaadan doono Max'med Bin salmaan oo ah dhaxal sugaha Aala Sacuud, Tamiim Bin Xamad Amiirka Qadar iyo Max'med Bin Zaayad oo ah xaakimka dhabta ah ee dowladda Imaaraatka carabta.
Wararka ayaa intaas ku daraya in maamulka Trump uu xusulduub ugu jiro sidii uu meesha uga saari lahaa go'doominta ay imaaraatka,Baxreyn iyo Aala Sacuud ay kusoo rogeen Qadar oo ah xaliif istiraatiiji islaam ladirira u ah Mareykanka.
khilaafka udhaxeeya qawasaarada gummeysiga ee dhulka Jaziiradda Carabta ayaa saameeyay danaha Mareykanka ee mandiqadda loo bixiyay Bariga dhexe, ismariwaaga udhaxeeya dhinacyadaas dabadhilifyada ah ayaa salka ku haya xifaatlan dhanka maamulka iyo awoodda ah.